Backup ဘယ်လိုလုပ်လဲ — MYSTERY ZILLION
သိပ်တော့သိဘူး ။ ၀င်4လိုက်အုံးမယ် :P။ back up ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို သိမ်းထားတာပါ။ computer တခုခု ဖြစ်ရင် data တွေမပြောက်အောင်ပေါ့ ။ တချိုက Hard disk မှာ Partition ခွဲ ပြီး သိမ်းတယ် ။တချိုက removal drive တွေနဲ့ သိမ်းတယ် ။ recovery ကတော့ အကြောင်းတခုခုကြောင့် hard disk ထဲက file damage ဖြစ်သွားတာတွေကို ပြန်ရအောင် ပြင်တာပေါ့။
Auto Backup Software is an easy-to-use program designed to automaticlly backup your critical data toalocal disk, the Network neighborhood or remote FTP servers. Backups & restores are amazingly simple. You can create multiple tasks to backup your data. You can use Auto Backup Software to makeareserve copy of any valuable data on your system manually or automatically. Restoring is very easy, you can select files to restore to the original oranew location. Auto Backup Software can do integrated encryption, compression, and can use password protection. You can create self-restoring archives.
It isasimple yet powerful backup solution for your business or for your personal needs inanetworking environment or onasingle machine. Award on Tucows
dead - phox
အကို ရေ ဒေါင်းလို့ မရဘူး ဖြစ်နေလို့ အဆင် ပြေမယ် ဆိုရင် mediafire နဲ့ တင် ပေးပါ ကျာ. error ကျနေလို့ ပါ .
ကိုကို Zero ရယ်.......... သီချင်းတွေ မပျောက်စေချင်တာများ partiation D ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပေါ့.........Window အသစ်လဲတော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ partiation C ကိုပဲ format ချ လိုက်လေ......... ဘာမှ ဖြစ်မသွားပါဘူး......... ကျွန်တော်ဆိုရင် Window အသစ် တစ်ခုကို စိတ်ကြိုက်တင်ပြီး အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်မှ Norton image checker နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Driver genius နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် D ထဲမှာ Backup လုပ်ထားလိုက်တယ်.......... Window error တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း Window ခဏခဏ မလဲရတော့ဘူးပေါ့..............
Driver Genius latest (8.0.0316)ကို
ကိုယ်သိမ်းခြင်တဲ့ဖိုငကို Drive D ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ဖောမတ်ချရင် Drive D ကဟာတွေမပျောက်သွားဘူးပြောတာလား၊အခုအကိုပေး
ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ Software က Driver - Backup ပဲလုပ်ပေးတာပါ..........
အကို့ စက်ထဲက hardware driver တွေကို partation D ထဲမှာ Back-up လုပ်ပေးထားပါ လိမ့်မယ်........ Window အသစ်လဲတဲ့အခါမှာ Driver CD Rom တွေနဲ့ အလုပ်မရှုပ်အောင်လို့ပါ........ ကျွန်တော်တို့ Window လဲတဲ့အခါမှာ partation C ထဲမှာပဲ Window file တွေကိုသိမ်းပါတယ်.......ဒါကြောင့် Window လဲတဲ့အခါမှာလဲ C ကိုပဲ format ရိုက်ပါတယ်..... D ကို မရိုက်ပါဘူး......... ဒါ့ကြောင့် Window ပြောင်းလဲခြင်းသည် D ကို သက်ရောက်မှု မရှိပါခင်ဗျား.........